သက်ဝေ: နှစ် ၆၀ ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ 
ဒီနေ့သက်ဝေတို့အမိမြန်မာပြည်ရဲ့နှစ် ၆၀ ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ 
ကိုယ့်အိမ်ကနေ အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ
နှစ်စဉ် ဇန်န၀ါရီလ လေးရက်နေ့ ရောက်တိုင်း
အော် . . ဒီနေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပါလား ဆိုပြီး
မှတ်မှတ်ရရ သတိရမိတာကလွဲလို့ 
ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိခဲ့ပါ။
ဒီနှစ်တော့ နှစ် ၆၀ တိုင်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ လေးအတွက်
ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ နဲ့ အတူ
ဒီကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
John Howard Payne ရဲ့HOME, SWEET HOME တဲ့ . . .
Me it ever so humble, there's no place like home;
Give me them, and the peace of mind, dearer than all!
Posted by သက်ဝေ at 1:07 PM